एक्सपर्टको अष्ट्रेलियन एज’केशन सेमिनारमा विद्यार्थीको घ’ईचो – Mukundasen Television
एक्सपर्टको अष्ट्रेलियन एज’केशन सेमिनारमा विद्यार्थीको घ’ईचो
| २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १८:४६ , प्रकाशीत
एक्सपर्ट एज’केशन एण्ड भिसा सर्भिसेस चितवनको आयोजनामा आज (विहीबार) भरतप’रमा भव्य ?पमा ‘ग्राण्ड अष्ट्रेलियन एज’केशन सेमिनार’ भएको छ ।
भरतप’र गार्डेन रिसोर्टमा विहान !! देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म चलेको सेमिनारमा विद्यार्थीह?को भीड लागेको थियो . प्रवेश निःश’ल्क गरिएको सेमिनारमा हेटौंडाबाट समेत विद्यार्थीह? आएका थिए . सेमिनारमा अष्ट्रेलियाका !३ वटा य’निभर्सिटि तथा कलेजका प्रतिनिधिह?ले अष्ट्रेलियन शिक्षा बारे परामर्श दिएको एक्सपर्ट चितवनका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए . सेमिनारमा सात सय भन्दा बढि विद्यार्थी तथा अभिभावकह?को उपस्थिति रहेको प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
परामर्श लिन प’गेका विद्यार्थीह?ले प्रत्यक्ष ?पमै अष्ट्रेलियाका आधिकारिक प्रतिनिधिसंग जानकारी लिन पाएको भन्दै ख’शी व्यक्त गरेका थिए . यस्तो कार्यक्रमले विद्यार्थीह?लाई अष्ट्रेलियाको शिक्षाको बारेमा राम्रोसंग ज्ञान हासिल गर्न सहज भएको उनीह?को भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एक्सपर्टका सिईओ सन्जिव शर्माले विद्यार्थीहरु लाई आफ्नै ठाउँमा सहज ?पमा स“चना पाउन् भन्ने उद्देश्यले सेमिनार गरिएको बताए । उनले यस्तो सेमिनारहरुको भरप’र फाईदा उठान विद्यार्थीह?लाई आग्रह गरे .
कार्यक्रममा एक्सपर्टका सिनियर काउन्सलर हरिहर शर्माले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै विद्यार्थीह?लाई मौकाको फाईदा उठान आग्रह गरेका थिए ।
सेमिनारमा विद्यार्थीह?संगै अभिभावकह?को पनि उपस्थिति रहेको थियो . सेमिनारमा चाल्र्स स्टट य’निभर्सिटि, भिक्टोरिया य’निभर्सिटि, य’निभर्सिटि अफ साउथन क्वीन्सल्याण्ड, टोरेन्स य’निभर्सिटि, साउथन क्रस य’निभर्सिटि, होल्म्स इन्स्टिच्य’ट, एक्ससेलेसिया कलेज, कप्लान विजनेश स्क’ल, क्वीबा, इसिए, ब्राइटन कलेज, अस्मी अष्ट्रेलियन स्कील्स म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्य’टका प्रतिनिधिह?ले परामर्श दिएका थिए ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा म“ख्य कार्यालय रहेको एक्सपर्ट उत्कृष्ट शैक्षिक परामर्श केन्द्रको ?पमा परिचित छ . एक्सपर्टको अष्ट्रेलियामा मात्रै ८ वटा शाखा कार्यालय रहेको छ . त्यस्तै ( वटा अन्य देशमा पनि एक्सपर्टले शाखा विस्तार गरी शैक्षिक परामर्श दिँदै आईरहेको छ ।
चितवनमा एक्सपर्टको द’ई वटा शाखाह? रहेका छन् . यहाँ उत्कृष्ट आईएलटिइएस प्रशिक्षकले अध्यापन गराउने गरेको प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए . एक्स्पर्टले वैदेशिक अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीह?लाई उत्कृष्ट परामर्श दिन’को साथै सामाजिक उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्दै आईरहेको छ . उसले दैविप्रकोपको बेलामा सहयोग गर्नेदेखि खेलक’द लगायत अन्य क्षेत्रमा सामाजिक कार्य गर्दै आईरहेको छ ।